Ciidamada Puntland iyo Daacish oo maalintii 3aad ku dagaalamaya bariga fog Puntland | Dhacdo
Ciidamada Puntland iyo Daacish oo maalintii 3aad ku dagaalamaya bariga fog Puntland
Ciidamada Puntland iyo dagaal-yahanada Ururka Daacish ayaa tan iyo Khamiistii la soo dhaafay ku dagaalamaya buuraleyda bariga fog ee Puntland.
Ciidamada kala duwan ee Puntland ayaa bishii hore ee June hawlgalo ka dhan ah Shabaab iyo Daacish ka bilaabay labada buurood ee dhinacyada uga kala yaala Magaalada Boosaaso ee Cal Madow iyo Cal Miskaad.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya inay adag tahay in faah faahin badan laga ogaado dagaalka bariga fog ee Puntland ku dhex maraya Ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Daacish, hase yeeshee Saraakiisha Ciidamada Puntland ayaa guulo ka sheegtay dagaalka.
Taliyaha Hawlgelinta Ciidamada PMPF-ta Puntland, Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo mar sii horeysay ka hadlay dagaalka ayaa yiri “Illaa bishii la soo dhaafay Ciidamada Puntland waxay hawlgalo ka wadeen bariga fog ee Puntland.”
Taliyaha ayaa yiri “Ciidamada meelo badan oo cadowga uu ku dhuumaaleysanayay bay ka burburiyeen, sahaydii iyo wixii yaalayna ay kala wareegeen, illaa shan goobood bay kala wareegeen.”
Isagoo ka hadlayay khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa wuxuu yiri “Dhankooda maxaabiis baa laga hayaa, dhimasho badan-na waa leeyihiin, wayna kala firxadeen oo hadda meel la yiraahdo Hol Caanood buu firxadkoodii marayaa, ciidankuna waa ku raad jooggaa. Dhanka Ciidanka Puntland laba askari baa dhaawac fudud soo gaaray.”
Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sheegaya inaanay itaal badani lahayn maleeshiyada Daacish, isla-markaana ay awoodooda ku kooban tahay miinooyin fara-badan oo wadooyinka ay ku aaseen, sida uu yiri.
Daacishta Somaliya oo ah garab ka jabay Ururka Al Shabaab ayaa daba-yaaqadii bishii October ee sanadkii 2015 looga dhawaaqay Buuraha Gobolka Bari.